I-China kuya ku-Oman-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Ikhaya>Inkomba Yezinsizakalo>I-Middle East Line>I-China kuya ku-Oman
Kuthunyelwa kusuka eChina kuya e-Oman
Iningi lamakhasimende ethu lizinze e-Oman, ngakho-ke sekuyimakethe ebaluleke kakhulu kithi. Sisayine amanani enkontileka nabaphathi abanjengeCOSCO, OOCL, APL, EMC, MSK, ne-HMM. Lobu budlelwano asivumele sikunikeze ngamanani amahle kakhulu wempahla lapho usuka eChina uye kunoma yiliphi itheku e-Oman.
Nge-SHL njengabalingani, ukuthumela izimpahla ezivela eChina kuya e-Oman kuzoba lula kakhulu, uzodinga kuphela ukushiya izimpahla zakho nathi, futhi senze okunye. I-SHL ihlose ukuba phambili phambili kwezimpahla zakho ukusuka eChina kuya e-Oman. Cela isilinganiso esihle manje.
Ukuhamba ngeRo-Ro / Break Bulk kusuka eChina kuya e-Oman
I-SHL inganikeza i-RORO ROROMAFI BREAKBULK ngemishini enembile, izimoto nemishini esindayo kusuka e-China kuye e-Oman Singanikeza izixazululo zokuma kanye nezisombululo ezihambelana nazo.
Ukuthunyelwa Kwasolwandle Olwandle kusuka eChina kuya e-Oman
Singahlinzeka ngamanani entengo olwandle wokuncintisana, nezisombululo ezihamba phambili zokuthumela, ngokususelwa esikhathini sakho esidingekayo sokuhambisa lapho usuka eChina uye echwebeni e-Oman (ikakhulukazi emachwebeni angaphakathi nezwe).
Ukuhanjiswa Kwempahla Yomoya kusuka eChina kuya e-Oman
Sizokhetha indiza ebiza kakhulu yokuthumela kwakho ngokuya ngezidingo zakho zesikhathi. I-SHL iyisisombululo sakho sokudlulisela imithwalo yempahla esuka eChina kuya e-Oman.
Ukuhamba Eshibhile Kakhulu kusuka eChina kuya e-Oman
Lokhu kuya ngokuthi zingaki izimpahla ozithumela zisuka eChina ziye e-Oman, uma ungasheshi ngesampula elincane kakhulu, ungasebenzisa i-China Post noma uveze njenge-DHL, uma unezimpahla eziningi, bese uthinta i-SHL, uzothola ukuthunyelwa kwethu okuhle kakhulu isilinganiso kusuka eChina ukuya ku-Oman.
Kuthunyelwa Isikhathi Esingakanani / Kangakanani kusuka eChina kuya e-Oman
Amasango ngomnyango ukusuka eThailand kuya e-Oman
Noma ngabe ngezidingo zomuntu siqu noma zebhizinisi, singakunikeza insiza yokuhambisa umnyango nomnyango, okubandakanya ukuvunyelwa kwesiko e-Oman.
Umthumeli Womthwalo Wakho Ohamba phambili osuka eChina uye e-Oman
Nikeza ngamanani olwandle ancintisanayo nolwandle kusuka eChina kuya e-Oman.
Izikhumulo zezindiza ezinkulu e-Oman
Isikhumulo sezindiza saseSalalah Isikhumulo sezindiza i-Muscat International
Izinhlobo Zokuthumela kusuka eChina ziya e-Oman
Whenever you’re importing from China to the Oman, you can choose many modes of shipping.
Imodi yokuthumela izoncika ku:
1. Izindleko zokuthumela
2. Uhlobo nohlobo lwezimpahla
3. Isikhala esitholakalayo, okusho ukwakheka kwe volumetric, sikhiye wempahla yolwandle
4. Ukuthi uyahamba ngomgwaqo noma olwandle
Ngakho-ke, yiziphi izindlela okufanele uzicabangele?
Roll-on / Roll-off shipping
UKUTHUTHA KWENQANABA LOKUTHUTHA
Ukuthunyelwa Okugcwele Kwesithwala (FCL)
Ukuthumela Kungaphansi Kwe-Container Load (LCL)
I-Out of Gauge (OOG) Shipping.
Yiliphi itheku okufanele ngilisebenzise ukuhambisa ngomkhumbi ukusuka eChina liye e-Oman?
Kunamachweba amaningi kakhulu eChina futhi ngigqamise iningi lawo kulo mhlahlandlela.
Kodwa-ke, njengomthetho wesithupha, sebenzisa esisodwa esiseduze nomphakeli wakho.
Udinga ukuxoxa ngalokhu nesihambeli sakho semithwalo.
Ngoba udinga imbobo engakuxhumanisa ngqo ne-Oman
Ngale ndlela, uzogcina isikhathi nemali.
Yisiphi isikhathi esiphelele esithathwa ngomkhumbi sisuka eChina siye e-Oman?
Imvamisa, isikhathi sokuhamba siyohluka kakhulu ngenxa yezizathu eziningi.
Unganquma isikhathi sesikhathi ngokuya ngesikhathi sokuhamba nezinye izinqubo zokungena.
Umsebenzi wamaphepha kanye nokuphatha umthwalo ungathatha amasonto amabili.
Ukuhanjiswa kungahluka phakathi kwamahora ambalwa kuya ezinsukwini eziningana ngokuya ngemodi yokuthumela.
Ukuthengisa umkhiqizo kusuka kumphakeli kungathatha izinsuku ezimbalwa noma izinyanga.
Ngamafuphi, ungazicijisa kuzo zonke lezi ukuthola sonke isikhathi esizothatha umkhumbi usuka eChina uye e-Oman
Kusho ukuthini ukuthi "Beat My Freight Quote" uma singenisa?
Beat My Frequote Quote yilapho ubhekana ngqo nochwepheshe wemithwalo yempahla ochwepheshe ngolwazi oluhle endaweni yakho.
Yonke imibuzo izobhekelwa yi-ejenti yendawo ezokwenza ucwaningo lwezinto ezinhle kakhulu egameni lakho.
Ngakho-ke, wonke amadili azoba phakathi komenzeli nawe.
Kwi-Beat My Frequote Quote, akukho khomishini ethathwayo kunoma yikuphi okwenziwayo okwenziwe futhi ungonga okuningi.
Ukuze ube ngumsebenzi onelayisense we-Beat My Freight Quote Freight, umgibeli wezimpahla kumele abe yilungu lenhlangano kazwelonke yokuhambisa izimpahla ezithwala izimpahla.
Futhi, umgibeli wezimpahla kumele abonise izinga eliphezulu lobungcweti.
Ezimweni eziningi, zivunywa amalungu e-FIATA noma e-IATA cargo agents.
Ngikwenza kanjani ukukhokha enkampanini yokuthumela izimpahla esekelwe eChina?
Umuntu angasebenzisa amasistimu wokudlulisa imali ukukhokhela i-akhawunti yasebhange yaleyo nkampani eChina.
Iningi lalezi zinkampani ezihambisa izimpahla ngokuhamba kwesikhathi lizoba nama-akhawunti ngamabhange aholayo afana ne-HSBC (Hong Kong neShanghai Banking Corporation).
Isidluliseli zimpahla singasizakala futhi sisheshe sithole noma yikuphi ukukhokha.
Anginayo i-Bill of Lading (B / L), yini okufanele ngiyenze?
Ungamemezela inombolo yereferensi yokubhuka yezimpahla esikhundleni senombolo ye- “Bill of Lading (B / L)” kwisicelo sakho semvume.
Okusho ukuthi, uma ungakaze unikezwe uMthethosivivinywa Wokuhola.
Ungabuyekeza imininingwane uma usuthole i-Bill of Lading ngokumane uthumele uhlelo lokuchibiyela.
Ngikuqinisekisa kanjani ukuphepha kokungenisa kwami ​​kusuka eChina?
Ukuqasha isazi sezimpahla esiqeqeshiwe nesinolwazi yikhambi okuwukuphela kwaso lapha.
Bazophatha zonke izinqubo, kungaba ukulayisha, ukulebula, ukuthutha noma imvume.
Abahambisi bezimpahla abanjalo bayayazi imithetho nemigomo elawula ukungenisa ezweni kusuka eChina kuya e-Oman
Eqinisweni, ukuqasha umshayeli wempahla okhokhelwayo kuzokusindisa imali nesikhathi.